मस्तिष्कले चाहेको गरिदिने मेशिन आउँदै « रिपोर्टर्स नेपाल
मस्तिष्कले चाहेको गरिदिने मेशिन आउँदै
आउने समय त्यस्ता कम्प्युटर र मेशिनहरू हुन सक्छन् जुन हातले काम गर्न आवश्यक छैन । तपाईं आफ्नो विचारहरूको साथ यी उपकरणहरू सञ्चालन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । मस्तिष्क र मेसिनको बीचमा सन्देशहरूको आदानप्रदान अब विज्ञान कल्पनको कुरा छैन । माइक्रोसफ्टले एक उपकरणको लागि अनुमति प्राप्त गर्यो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न किसिमका मेशिनहरू र तिनीहरूमा चालु प्रक्रियाहरूलाई केवल सोचले नियन्त्रण गर्नेछ । सामान्य मानिसको विषयलाई छोडौँ, आगामी दिनमा यस्तो गजबको उपकरणले विज्ञहरुलाई ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
यो उपकरण हेडब्यान्डको रूपमा आउनेछ जसमा धेरै सेन्सरहरू हुनेछन् । जसले मस्तिष्कमा विचारहरूले उत्पन्न गरेको संकेतहरू बुझ्दछन् र आवश्यक निर्देशनहरू कम्प्युटर वा अन्य उपकरणमा पठाउँछ । अथार्त, तपाई कल्पना गर्नुहोस् कि माइक्रोसफ्ट वर्ड खुलोस्, त्यो खुल्नेछ । आफूले सोचे जस्तो कम्प्युटर सञ्चालन हुनेछ । कम्प्युटरहरू, माईक्रोसफ्टको आधिकारिकताका कागजातहरूमा उल्लेख गरेझैं अन्य मेशिनहरू पनि यस उपकरण मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
भर्खर एउटा समाचार आएको छ कि इलेक्ट्रोनिक उपकरण निर्माता सामसुंग एक स्मार्ट टिभीमा काम गरिरहेको छ जुन एक व्यक्तिको दिमागद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । उनी स्विजरल्याण्डको पोलिटेक्निक फेडरेले डे लौसान्ने कोलमा न्यूरोप्रोस्टेटिक्स केन्द्रको साथ ’प्रोजेक्ट पोइन्ट्स’ परियोजनामा काम गरिरहेकी छिन् । यसको उद्देश्य दर्शकहरूले टिभी च्यानल परिवर्तन गर्न सक्ने र सोचे पछि मात्र बढी वा कम आवाज हुनेछ । यस स्मार्ट टिभीको ट्रायल अर्को वर्ष सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्राकृतिक जिज्ञासा–कसरी हुन सक्छ ? कसरी एउटा मानिसको विचारबाट मेसिन निर्देशनको रूप काम गर्न सक्छन् ?
यी गैर–इनभ्यासिभ (शरीर भित्र प्रवेश गर्दैन) इलेक्ट्रोडहरूले यी समान भोल्टेज परिवर्तनहरू नाप्छन् र तरंग–जस्तो आकारको रूपमा रेकर्ड गरिन्छ । त्यस्तै, यस हेडब्यान्डमा निर्मित सेन्सरहरूले मस्तिष्कमा प्रवाह भएको संकेतहरू पनि लिन सक्दछन् । जस्तै तपाईले कम्प्युटर बन्द गर्ने चाहे उपकरणले बन्द गर्न सक्षम हुनेछ ।
किबोर्डमा एक विशेष कुञ्जी थिचेर दायाँ वा बायाँ माउस बटन क्लिक गर्न र वेब ब्राउजरमा एक विशिष्ट वेबसाइट खोल्न तिनीहरूलाई प्रशिक्षण सत्रको दौरान सूचित गरिन्छ । उसले ती दुई अवस्थाहरूबीच तुलना गर्न सिक्छ । यस्तो अनुगमन पछि प्रणाली संकेतहरूको अर्थ खुलाउन सक्षम हुन्छ ।
याद गर्नुहोस्, जब तपाईं भ्वाइस टाइपिंग सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई केहि वाक्यहरू बोल्न भनिन्छ ताकि प्रणालीले तपाईंको उच्चारण र उच्चारण फेला पार्न सक्दछ । लगभग समान प्रक्रिया यहाँ हुन्छ। यसलाई अधिक सटीक बनाउनको लागि, आँखा स्थितिहरू, उनीहरूको फोकस क्षेत्र, रोटेशन स्पीड आदि पनि निगरानी गरिन्छ, जसरी सामसुङले गरिरहेको छ ।
माइक्रोसफ्टको अनुमती अधिकारका अनुसार यी सेन्सरहरूले दिमागमा घुम्ने चाहनाहरू (अभिप्रायहरू) संवेदना गर्न सक्षम छन् । जब एक प्रयोगकर्ता एक शारीरिक गतिविधिको बारेमा सोच्दछ वा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, मस्तिष्कको नशालाई जानकारी गराइन्छ ।-पाञ्चजन्यबाट